Tours Luxury India- Tour Operator Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Hafatra avy amin'ny Biraon'ny MD
Car Rental Rental Tariffs
Fandefasana fiara fitateram-bahoaka
Tempo Traveler Price any Bhubaneswar
Bhubaneswar Puri 1 alina / 2 andro
BhitarkanikaNy Valan-javaboarin'i Bhitarkanika no faharoa ara-tontolo iainana faharoa any Inde. Ny Sand Pebbles Tourisme Bhitarkanika dia hamela anao hiaina ilay hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa ao amin'ny faritra mando. Ny tanin'ny ala honko maitso, ny vorona sy ny sokatra mivelona, ​​ireo voay mitsingevingana miaro ny renirano, ireo rano mandevona, ireo tranokely manodidina ny fidoboky ny vorona sy ny natiora dia manintona ireo mpitsidika avy any amin'ny toerana lavitra sy lavitra mba hitarihana ireo toerana tsy manan-tsahala . Ny mpahay siansa, ny manam-pahaizana, ny tia ny natiora ary ny mpizahatany dia manana sakafo be dia be ho an'ny eritreritra sy ny fikarohana. Ny fizahantany Bhitarkanika dia mirakitra ireo sehatra rehetra amin'ny fisintonana. Io toerana io dia iray amin'ireo fananganana tsara indrindra hatramin'izay. Bhitarkanika dia toeram-ponenana tsy manam-paharoa amin'ny ala Mangrove izay miforitra amin'ny toeram-pisakafoanana sy dobo maro ao amin'ny distrikan'i Kendrapara ao Odisha. Iray amin'ireo toeram-piarovana mangatsiaka indrindra any India, Bhitarkanika dia trano fonenan'ny biby sy biby isan-karazany. Amin'ny sambo Sand Bhitarkanika Ny sari-tany momba ny fizahantany dia afaka manana ny traikefa tadiavinao. Ny fahasamihafan'ny bio dia manintona ireo mpitsidika ny haren'ny natiora. Ny valan-javaboarin'i Bhitarkanika dia toerana fonenana leoparda, saka-trondro, saka-jiosy, hyena, lambo, bibidia, sambar, porcupine, dolphin, voankazo salohy ahitàna voay bitika kely, python, king cobra, lakandranon'i watch, terrapin, marine torta, mpanamboatra fiaramanidina, mpitaingin-tsoavaly, baolina lavalava, gisa mitahiry barazy, entana Brahmani, pintail, ...
Bhitarkanika 01 alina / 02 andro
Similipal Bhitarkanika 4 alina / 5 andro
Travel Packages avaratra atsinanana
Tours Luxury India
Tandindonin-doza India - Te-hizaha toerana vaovao? Miangona ny fitiavantsika.
Hatramin'ny 1993, ny Sand Pebbles Tours foana no tsara indrindra maso iraisam-pirenena mba hanomezana fahafaham-po tanteraka ny fitsidihan'i Inde.
Ny fanapahan-kevitra iray hotsidihina dia fanapahan-kevitra manan-danja. Ny famintinana ny mpitsidika dia tena manan-kery kokoa. Miezaha tsy hiala amin'ny fitsidihanao. Mangataha ny tsara indrindra ... Fialam-boly ara-panahy na asa atao ho an'ny adventure? Sampana Summer or Honeymoon packages? Manana anao izahay. Eto izahay mba ahafahanao mahita ireo zavatra ireo ary manao ireo zavatra izay tsy azonao atao.
Hahita sy hahatsapa ny fanoloran-tena sy ny tsy azo resena ao amin'ny tanin'ny fahamboniana ara-tsakafo.
Ny faritra tsy dia fantatra loatra, ny tany miafina ao avaratra-atsinanana dia tsy azo inoana fa toerana mystika hitsidika sy paradisa tsy fantatra!
Fantaro an'i India miaraka amin'ireo toerana misy ravin-tany misy azy, toerana malalaka, zaridaina dite ary maro hafa.
Fantaro sy iaino ireo toerana manan-danja manerana an'izao tontolo izao miaraka amin'ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny fonosana iraisam-pirenena.
Soraty ao amin'ny tranokala isan-karazany fialan-tsasatra isan-karazany ny tranokala fitsangatsanganana misy anao, ary hijerena toerana mahafinaritra manerana an'i India.
Exclusive Wildlife - Tour Odisha
Kolkata - Gangasagar - Sundarbans
Mandehana mankany Lonavala - Khandala
India dia fantatra amin'ny maha-firenena manana lova ara-kolontsaina goavana, toerana mahafinaritra, rafitra mahasarika ary harena miafina. Any amin'ny morontsiraka atsinanan'i India no misy an'i Odisha. Ny zava-drehetra dia hisarika ny sainao ary maniry anao hangataka bebe kokoa mandra-pahitan'ny masonao feno maso.
Ny Tenin'ny mpanjifa
Sand Pebbles dia fisaorana manokana ho an'ny ireo mpanjifany miavaka izay nampirehareha anay tamin'ny teny manan-danja nataony. Asehoy ny fomba nampiasan'ny mpanjifa maneran-tany Sand Pebbles ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny fianakaviana sy ny mpiara-mitory ary nanaisotra ny kofehin'ny LIFETIME EXPERIENCE.
Sand Pebbles no iray amin'ireo mpizaha tany tsara indrindra any Odisha. Hamaky bebe kokoa..
Fahatsiarovana tsy hay hadinoina ny Tours sy ny Travel Sand Pebbles. Hamaky bebe kokoa..
Iray amin'ireo traikefa tsara indrindra azonao atao amin'ny vatokely fasika, Hamaky bebe kokoa..
Miresaha amin'i Odisha miaraka aminay
Fiainana ny fiainana. Mino isika fa ny dia afaka manova ny olona amin'ny fomba tsy ampoizina. Mialà fotoana vitsy mialohan 'ny andro mahatsiravina hijery ity lahatsary ity ary eritrereto ny tenanao ao Odisha.
Hiaina, hianatra, hahita ary ho talanjona amin'ny hatsaran-tarehy rehetra hita. Avia ary ankafizo ny hatsarana rehetra amin'ny Tours India avy amin'ny lova ara-kolotsaina manan-kery ho an'ny rafitra tsara tarehy na dia misy aza ny fahatsapana, mahatsapa ny hatsaran-tarehy madio rehefa manao fitsidihana iray mahafinaritra.
Fepetra Politika Politika fandefasana Blog Testimonials Mifandraisa aminay Sitemap E-Broucher
Sand Pebbles Tours © 2019. Zo rehetra voatokana
Terms Politika Politika fandefasana Sitemap E-Broucher
Mangataha antso iray
Ampidiro ny antsipirianareo etsy ambany mba hangatahana antso an-tariby ary havaozina haingana araka izay tratra.
anarana * Telephone *